Njengamanje, ukusetshenziswa kwamafutha we-thistle kuvamile emikhakheni ehlukahlukene yemithi kanye nemithi. Isikhathi esithile manje sesenezelwe emikhiqizweni eminingi yezimonyo, ngisho nemikhiqizo yokudla. Nokho, akuwona wonke umuntu owaziyo ngezinzuzo zayo kuze kube manje.
Ukusetshenziswa kwamafutha we-thistle: izakhiwo eziwusizo
Okokuqala ngifuna ukuqaphela ukuthi umkhiqizo unomthelela ocebile we-vitamin. Yilokho kuphela iqoqo lamavithamini A, E, D, no-F! Ngaphezu kwalokho, amafutha aqukethe i-zinc, eqinisekisa ukusebenza okuvamile kweseli ngalinye lomzimba nokugcinwa kokuvikelwa kwamagciwane ezingeni eliphakeme. Msize kule nqubo, selenium kanye nethusi. I-Vitamin F ingumphumela othize, ngoba ukusetshenziswa kwayo njalo kuvimbela ukuthuthukiswa kwe-sclerosis futhi kuthuthukisa inkumbulo. Ukusebenza kwangaphandle kwesidakamizwa kunomthelela wokulwa nokuvuvukala. Ukwelashwa kwamanxeba obunzima obuhlukile kuphuthuma inqubo yokuphulukisa. Ukusetshenziswa kwamafutha we-thistle nakho kungenzeka njenge-antiulcer. Ochwepheshe abaningi bayancoma ukuthi iziguli eziphethwe yi-gastritis, izilonda nezinye izifo zezinkinga zomzimba. Amafutha asiza ukuthuthukisa impilo ye-varicose veins, i-psoriasis, isifo sikashukela kanye nesibindi esingasebenzi kahle kanye nokusebenza kwezinso. Uma kunesidumbu somzimba, ikhambi elingenhla lidingekile.
Amafutha enhlobonhlobo: isicelo, imfundo
Uma usebenzisa amafutha njengomuthi, igama kanye nomthamo kunqunywa udokotela oya khona. Ukuzithokozisa akukhuthazwa, ngoba isazi sithembele ekuxilongweni oluthile kanye nezici zomzimba ngamunye. Izinyathelo zokuvimbela, njengomthetho, ziyizinga futhi azidingi indlela yomuntu ngamunye. Ekusebenzeni kwezokwelapha, ukusebenzisa ubisi lwe-thistle ubisi kakhulu, kuthatha kokubili ukwamukela kwangaphakathi nokuphathwa kwangaphandle kwamanxeba nokushisa. Ukuze uzivikele emiphumeleni evuthayo yelanga, ogwini kufanele usebenzise lezi zindlela. Kodwa ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa abesifazane abhekana nenkinga efana ne-vaginitis. Amafutha kufanele ajowe ngqo endaweni ewonakele. Ukuze kube lula kwenqubo, ungasebenzisa i-syringe, ngemva kokukhipha inaliti kuyo. Abanye besifazane bafaka umsila, bagcobe ngamafutha ebusuku. Le ndlela ibuye ihle, kepha ukusebenza kwayo kuncane kakhulu. Ezinsukwini ezingu-12 uzobona ukuthuthukiswa okuphawulekayo, ekuseni akufanelekile ukufaka i-douching nge-douching, njenge I-microflora ephazamisekile.
Amafutha enhlanzi: isicelo, ukubuyekezwa
Abesifazane abaningi bakhetha ukuthenga izimonyo ezingathathi hlangothi nokuzicebisa ekhaya. Isibonelo, kuwo wonke ama-creams nama-lotions ebusweni nasemzimbeni, ungangeza amaconsi amahlanu kuya kweyishumi. Abanikazi besikhumba esinenkinga bayanconywa ukuba benze mask-application kanye ngosuku. Ukuze wenze lokhu, i-napkin ekhethekile enezinyolo emehlweni nezindebe kuhlanganiswa ngendlela yokumangalisa futhi sibeka endaweni ewonakele imizuzu engu-15.
Ukusetshenziswa kwamafutha we-thistle ngokuhambisana neminye imikhiqizo, isibonelo, ngamafutha abalulekile e-ylang ylang, imbewu yamagilebhisi noma izithelo ze-citrus, iyamukelwa. Noma ubani ozozwa umphumela wenqubo enjalo, ngeke akwazi ukuwenqaba esikhathini esizayo.
I-Berry raspberries: izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana
Thobekile Mussorgsky sika "Boris Godunov": wokuqukethwe opera okufutshane
Ukufunda kusukela Kiev. Indlu Chimeras: umlando, izithombe